Archive du 20190226
Me Hanitra Razafimanantsoa “ Efa niadianay ary mbola hiadianay ny kolikoly”
Tontosa soa aman-tsara tao amin’ny Salle d’oeuvre EKAR Soanierana ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao nataon’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), ao amin’ny faha-4.
Mpiara-miasa amin’ny JIRAMA “Aoka izay ny tombotsoa mihoapampana”
Nidina teny amin’ny teny amin’ny toby mpamokatra herinaratra an’ny orinasa jirama eny Ambohimanambola ny Lehiben’ny governementa Ntsay Christian omaly maraina, niaraka tamin’ny minisitry ny Angovo, ny Tale jeneralin’ny Jirama.
Hentitra ny Kaominina “Sazio ary izay nivarotra ny zaridainan’Antaninarenina”
Tsy nivarotra, tsy mivarotra ary tsy hivarotra tany mihitsy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), tarihan’ny ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, hoy ny valin-kafatry ny CUA omaly eo
FIBEMIH Betafo 2019 Hankalaza ny faha-15 taonany
Nisy ny fanokafana ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny fikambanana FIBEMIH tamin’ny alahady 17 febroary 2019 teo tao amin’ny Centre Fibemih Imerimandroso Atsinanantsena Betafo, notarihin’ny filohany Ratheo
Gala International de Multi-Boxe Goragora ny fikarakarana
Notontosaina tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina tamin’ny sabotsy 23 febroary2019 tolakandro teo ny hetsika “Gala International de Multi-Boxe”
Edito Marary ny firenena
Sosialy, toekarena, kolontsaina, fanatanjahantena, indrindra moa fa ny politika dia sarotra ny hilaza ireo rehetra ireo fa efa tomombana tanteraka ny momba azy avy.
Fitaterana an-dranomasina Tokony hifamatotra amin’ny teknolojia vaovao
Nisy ny atrikasa famolavolana ny fandrafetana ny drafitra nasionaly momba ny fikarohana sy famonjena an-dranomasina (SAR) notanterahina tetsy amin’ny foiben’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy ny ranomamy (APMF) Alarobia omaly alatsinainy 25 febroary.
Loza manjo ny moto scooter Vokatry ny fandehanana mafy sy ny fandikan-dalàna
Nisesisesy hatrany ny loza mihatra amin’ireo mpitondra moto scooter teto Antananarivo sy tany amin’ny faritra tato ato. Matetika dia fahamoizan’aina mihitsy no mahazo ny mpitaingina ireny moto scooter ireny rehefa sendra ny loza.
Fahasalamam-bahoaka Mila fampivoarana ny rafitra sy ny fitaovana
Mbola ahitana kolikoly ny sehatry ny fahasalamana, indrindra eny amin`ireo toeram-pitsaboana mampitaraina ny marary sy ny fianakaviana manana ny tsy salama midodododo eny amin`ny hopitaly.
Fanafihana teny Ambohipo Jiolahy roa maty voatifitry ny UIR
Jiolahy roa no voatifitry ny polisin’ny UIR teny Antsobolo, Ambatomaro omaly alatsinainy tokony ho tamin’ny 12h30 raha saika hamaky toeram-pivarotana fanafody iray teny Ambohipo. araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.
Lalana mihotsaka eny Soanierana ambony Fianakaviana 9 nalana tamin’ny trano fonenany
Olona 54 ao anatina fianakaviana miisa sivy no voatery nalana tamin’ny toeram-ponenany omaly teny amin’ny fokontany Soanierana I sy III, Boriborintany fahefatra vokatry ny fihotsahan’ny lalana eny an-toerana.
Madagasikara Ala 50.000 ha no manjavona isan-taona
Mihasimba hatrany ny tontolo iainana eto amintsika vokatry ny fandripahana ala tsy ara-drariny.
Faritry ny tsena kaominalin’Ambohijatovo Tsy milamina ny tanàna amin’ny gaboraraka misy
Tsy milamina mihitsy ny tanàna amin’ny gaboraraka misy etsy amin’ny faritry ny tsena kaominaly etsy amin’ny fokontanin’i Mandrosoa-Ambohijatovo-Ambatonakanga-Antsapanimahazo noho ny gaboraraka miseho eny an-toerana.
Rafitra momba ny antontan’isa Mila averina alamina
Ahoana no ahazoana antontan’isa azo antoka sy ara-potoana ? Fanontaniana mipetraka amin’ny resaka fikirakirana antontan’isa eto Madagasikara io.